စစ်ရေးကတော့ ကြိုတွေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ – Sport Gaber
လိုအပ်ချက်တွေရှိနေ တာကြောင့် အခြေနေအရ အထနှေးနေတဲ့ NUG,PDF(ဗဟို)တို့ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၊ယနေ့အထိ သူတလူငါတစ်မင်းဖြစ်နေတဲ့ တချို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ မပြတ်သားမှုကိုအခွင့်ရေးအဖြစ် အသုံးချပြီး
မအလနဲ့စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကို လက်ဦးမှုယူနေပါပြီ။
20.7.2021နောက်ပိုင်း ထိုးစစ်အတွက် မအလဘက်က အစီစဉ်တကျ သေခြာပြင်ဆင်ခဲ့သလို
23,ရက်နေ့ ICJရဲ့ရုံးချိမ်းခေါ်ဆိုမှုကိုလည်း မထိမဲ့မြင်ပြုခဲ့ပြီး သူတို့လုပ်စရာရှိတာကို
ခုဆို UNHCR ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရပြီးနောက်ပိုင်း မင်းတပ်ဒေသကို စစ်အုပ်စုဘက်က အကြမ်းဖက်မှုတွေစတင်လာပြီး အင်းအားအလုံးအရင်းနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက် ဒေသခံသူတွေ အိုးအိမ်စွန့်ခွာနေရပြီး နယ်မြေခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့လည်း
ချင်းလူမျိုးနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ တော်လှန်ရေးစွမ်းရည်နဲ့ သတ္တိရှိမှုကိုသိနေတဲ့ မအလနဲ့စစ်အုပ်စုဟာ
အပစ်ရပ်ထားတဲ့အချိန်တွင်း ချင်းပြည်နယ်ကို စစ်အင်အားအမြောက်အများပို့ခဲ့ပြီး အလုံးစုံထိမ်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အင်အားသုံးပြီးကြိုးစားနေပါပြီ။
ထောင်နိုင် ထနိုင်တဲ့ဒေသတွေကို ကြိုတင်ဖိနှိပ့်ထားမယ်ဆိုတဲ့နည်းဗျူဟာအတိုင်း မညီညွတ်တဲ့အားနည်းချက်ကို ကြည့်ပြီး ဦးထောင်ရင် ဦးနင်း၊ ပဲ့ကထောင်ရင် ပဲ့ကို ဖိနင်း လိုက်…
ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း
အခြေတကျဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေဘက်က ငြိမ်သွားတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာဘက်ကလည်း ဘာမှမပြောတော့ပဲ ကြာရင် မူလအတိုင်းပဲ လက်ခံလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ နေဝင်း၊သန်းရွှေတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း ပြည်ပဖိအားကိုဂရုမစိုက်ပဲ ပြည်တွင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားဖို့အတွက်ကိုသာ အဓိကထားပြီး အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကို ဆက်လုပ်နေတာပါ။
မအလနဲ့စစ်အုပ်စုဟာ ယခုအခြေနေမှာတော့ ချင်းနဲ့ကချင်ကို ဖိဖို့အတွက် ဦးစားပေးပြင်ဆင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ရေကြောင်းကနေ
စစ်သုံးသံချပ်ကာကားတွေအပါဝင် လက်နက်ကြီးနဲ့ တင့်ကားတွေကို ပို့ဆောင်ထားပါပြီ။
ကုန်းလမ်းကနေ စစ်အင်အားများစွာပါတဲ့ ယာဉ်တန်းတွေကို မန်းလေ-မြစ်ကြီးနားလမ်း
မန်းလေး-ဗန်မော်လမ်း နဲ့ မူဆယ်-မန်းလေးလမ်း စတဲ့ လမ်းကြောင်း ၃ခုကနေ ပို့ဆောင်နေပါတယ်။
မအလနဲ့စစ်အုပ်စုဘက်က KIAကို ဖိထားနိုင်ရေး မည်သို့ပင် ဆောင်ရွှက်နေပါစေ စိုးရိမ်မှုမရှိသလို စိတ်လည်းမပူပါဘူး။
ရိက္ခာ၊လက်နက်နဲ့အင်အား ပြည့်စုံတဲ့အပြင် နည်းပညာပိုင်းနဲ့ဗျူဟာပိုင်းအရ မအလစစ်အုပ်စုထက်မသာရင်တောင် မလျော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
စစ်ပွဲအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သလို စစ်ရေးအရ ဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကို
ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကချင်မြေကိုတက်လာသမျှစခတွေအတွက် မြေသြဇာဖြစ်ဖို့ကလွဲလို့ အခြားမရှိပါ။
စိတ်ပူမိတာက ချင်းပြည်နယ်က တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်ပါ။ အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယနေ့အထိ ဒီတိုင်းပဲ ထိုင်ကြည့်နေအုန်းမယ်ဆိုရင်တော့
မင်းတပ်ဒေသဟာ ထပ်ပြီးနာကြအုန်းမှာပါ။ ငါ့ဒေသမထိသ၍၊ ငါ့အမျိုးမထိသ၍၊ ငါ့နယ်မြေမလုသ၍၊ငါ့အကျိုးစီးပွားမထိသ၍ စစ်အုပ်စုပေးထားတဲ့မတ်လုံးကြီးပိုက်ပြီး
ယနေ့အထိ သဘောထားကွဲနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ၊ယနေ့အထိ စစ်အုပ်စုဘက်က နွားဖားကြိုးထိုးပြီး ခိုင်းနေတာကို ဂုဏ်ယူနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ၊
ယနေ့အထိ လက်နက်ကိုင်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာကြောင့်လဲ.?ဆိုတာ မသိသေးတဲ့သူတွေ
တော်လှန်ရေးအတွက် အသက်တွေသွေးတွေဘဝတွေ ပေးဆပ်လို က်ရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကို
မျက်နှာမမူရဲပဲ သူရဲဘောကြောင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ. ရှက်တတ်ရင်သေလို့ရတယ်နော်။
သေခြာတယ် ဒီဘက်စစ်မျက်နှာတွေကို စိတ်တိုင်းကျနှိမ်နှင်းပြီးတဲ့အခါ မအလနဲ့စခတွေ ခများတို့ဘက်ကိုလာမယ်ဆိုတာက အစဉ်လာဖြစ်နေလို့ လာမှ ချမှာလား မလာခင် စ,မှာလား စဉ်းစားပေါ့။
ခုကတော့ ချင်းက ရှိတာနဲ့ခံချနေပြီ။ ကချင်က သိတာနဲ့ပြန်စနေပြီ။ အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ခများတို့အားလုံး ညီညွတ်နေမှဖြစ်မယ်….?
Previous Article တိုင်းပြည်နဲ့အမေစုရဲ့ ကံဇာတာဟာ သြဂုတ်လမှာပြန်တက်လာပါပြီ
Next Article မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတာ်ဘုရားကြီး၏ အံ့ဖွယ် ခြေရာတော်